Amacandelo eprofayili yealuminium extrusion abavelisi kunye nababoneleli - Ixabiso eliphantsi leapluminium aluminium extrusion factory
IAluminiyam ingxubevange sisinyithi esingenantsimbi.
IAluminiyam ingxubevange inobuninzi obuphantsi kodwa amandla aphakamileyo ngokuthe gca, asondeleyo okanye agqitha kulawo akumgangatho ophezulu wentsimbi. Ineplastikhi elungileyo kwaye inokuqhubekiswa kwiiprofayili ezahlukeneyo. Inokuqhuba kombane ngokugqwesileyo, ukuqhuba kobushushu kunye nokumelana nomhlwa. Isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso kwaye ukusetyenziswa kwayo kungokwesibini kuphela kwintsimbi. Ezinye ii-aluminium alloys zinokunyangwa ngobushushu ukuze zifumane iipropathi ezilungileyo zoomatshini, iipropathi zomzimba kunye nokumelana nomhlwa.
Ukomelela akunakuthelekiswa nochungechunge lwe-2XXX okanye uthotho lwe-7XXX, ubukhulu bayo be-magnesium kunye neempawu zesilicon ze-alloy zininzi. Inentsebenzo egqwesileyo yokuqhubekeka, iimpawu ze-welding ezigqwesileyo kunye neepropathi zokwenza izinto, kunye nokumelana okuhle. Ukubola, ukuqina okuphezulu, akukho deformation emva kokuqhubekeka, izinto ezixineneyo ngaphandle kweziphene kunye nokupolisha ngokulula, umbala wefilimu olula, isiphumo se-oxidation esihle, njl.
Nabani na oqonda iimpawu zealuminium uyazi ukuba imichiza ye-aluminium kwi-alloy isebenza kakhulu, kwaye inokusabela ngokukhawuleza ngeoksijini esemoyeni ukwenza ifilimu eshinyeneyo ekhuselayo ye-aluminium oxide.
Umzobo wocingo ungenziwa kwiingqolowa ezithe tye, ukutya okuziinkozo okungaxutywanga, intambo, incence kunye nokujikeleza okuziinkozo ngokweemfuno zokuhombisa.
6016 aluminium ingxubevange unyango ubushushu CNC iindawo machining
Unyango lobushushu lwe-aluminium alloy castings kukukhetha inkcazo ethile yonyango lobushushu, ukulawula isantya sokufudumeza ukunyukela kubushushu obuthile kangangexesha elithile kwaye upholise ngesantya esithile ukutshintsha ubume bengxubevange.